ဂိမ်း mouse ကိုအမှတ်တံဆိပ် - MEETION
ဂိမ်း mouse ကိုအမှတ်တံဆိပ်
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ဂိမ်း mouse ကိုအမှတ်တံဆိပ်.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် MEETION.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် MEETION.
Shenzhen Meetion Tech Co. , Ltd. ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကို QC အဖွဲ့မှပြုလုပ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောရေကန်အရွယ်အစားများသို့မဟုတ်ပုံစံများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အမျိုးမျိုးသော parameters များကိုတင်းကြပ်စွာစစ်ဆေးသည်။.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ရည်ရွယ်သည် ဂိမ်း mouse ကိုအမှတ်တံဆိပ်.ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်ဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခွင့်များကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။
Slim 2.4G ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ် Chocolate Computer Keyboard Wk84
item အမှတ်: MWK841အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: အနက်ရောင်& အဖြူရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာအတွက်Ean: Black: Black: 697034444731646 White: 69703447731691ဖော်ပြချက် - အရွယ်အစားပြည့်ဝသောကြိုးမဲ့ချောကလက်ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်